Xubinta Taranka Ragga Oo Yar Saameyn Raaxo Ma Leeyahay
» Xubinta Taranka Ragga Oo Yar Saameyn Raaxo Ma Leeyahay
Ragg badan oo xubintooda taranka yar yahay ayaa wel wel daris u ah mar waliba kuwasi oo aaminsan in lamaantooda macaanka galmada dha-dhansiin karin taasi oo ku qasabta in wadooyin kale maciin bidaan si ay xal uu helaan laakiin jawaabta su`aashaan waxa ay noqoneysa Haa malabyarowga yar saameyn raaxo labada dhinac wuu u leeyahay .
Dhirirka xubinta taranka ragga caafimaad ahaan waa 7cm halka xubinta taranka ee dheer gaareyso 15cm waxaase xusid mudan kan ugu dheer oo inta badan rag dhif ah leeyihin waa 24cm .
Hadaba malabyarowga ugu gaaban haddii aan laga bad badineyn waxa uu gaaraya 5cm waan suura gal in haween badan ku qancin waa laga helayaa raaxo macaan oo labada dhinac ay dareemyaan waxase muhiim ah in galmada ka hor baashaal badan uu jiro.
Waxaa xusid mudan in dhirarka darbiga gadaal ee xubinta taranka haweenka uu yahay 9cm ugu yaraan hadaba xubuinta taranka ragga ee dhirarkooda gaarayo inta dhaxeya 7cm,8cm, ilaa 9cm waxa ay noqoneysa macaanka raaxada mid iska cadi ah
Xubinta taranka ragga ee gaaban waxaa muhiim ah in uusan jilicsaneyn oo uu adag yahay kaasi oo xogi kara goobaha dareemaha ii xubinta haweenka gaar ahaan labada darbi ee bishimaha xubinta hawenka iyo qeybta hoose
Anonymous11/05/2010haddi aan leeyahay xubinta taran raga oo dhererkeeda yahay 13 cm bal ka waran maxaa uu ku kordhin karaa raaxada haweeneyda ay rabtaReplyDeleteAnonymous8/04/2012Yaraantu waxay leedahay qaneeco dari iyo raaxo la'aan. Marka ninka kuugu horeyso oo aadan hore u soo guursan aqoona u lahayn waa dhibaato haysata dumar badan. Aniga intaana ilmo dhalin waan dareemi jirey ninkeyga sidaanse u dhalay ilmihii koowaad dareenku waa soo yaraanaayey ilaa aan diido inuu ila raaxeysto waayo haduu dareenkeygu kaco ima qancin karo oo caro ayaan ka qaadaa iyo inaan musqusha ku ooyo. isagaa dhamaysta markii danbanaa wuu iga caajisay oo dareemay inaanan niyad u hayn. Markaan dareemay inuusan cilada fahanasanayn baan iri dhakhtar aad oo soo wareyso inaad normal tahay aniguna waan tagey in size ku iga waynaadey dhalamada kadib waxaana lay yiri waxaad tahay ok, isagiina wuxuu noqday 9 cm. taasoo cuqdad ku abuurtey iyo inuu iska shakiyo meeshii aan caawin ama qaab fiican u raadin lahayn. Hadda sanado badan kadib waan kala tagnay wakhti dheer buuna iga lumiyey oo iyadoo nin i qabo aanana raaxo aan ku qanco helin weligeey!! Marka waxaan kula talinaaya gabadhaha inaad qanacdo waa masuuliyadaada, hadaadan qancin raadi sabaabta oo xalkeea raadi. Nolosha aduunku waa wax yar xaqbaad u leedahay inaad ninkaagu ku siin karo baahidii aad nin uga baahmayd.. RG su'aalaha gabadhaha cabanaaya inaysan ragooda ku qanacsanayn si fiican oo daacad ugma jawaabtaan oo waad kormartaan ilaahay ka baqa oo runta ha iska indha tirina.ReplyDeleteRaaxada Galmada8/04/2012Asc WrGabarta iga horreysa. Waad mahadsan tahay khibradaada aad noo sheegtay. Adiga waxaad ku xallisey inaad kala tagtaan. In qoysku burburnama fiicna. Maxaad tala ah oo aad u soo jeedin lahayd lammaanayaashaa dhibkan oo kale haysto, ka dib marka la ogaado cillada. Maxaa lagu xallin karaa oo aan ahayn kala tag, si gabadhu ugu qanacdo galmada, ninkana aysan ugu dhicin qucqda-nafsiya. Xilliga galmada la samaynayo muxuu ninku ku kabi karaa oo uu ku taageeri karaa xubintiisa taranka ee yar. Adoo raalli ah noo wada faaiidee, maadaama aad soo martay dhibkan.MahadsanidRaaxada GalmadaReplyDeletemr ilyaas xuseen12/07/2015waymahadsanyihiin labadanqofba waxan idiin shegayaa naagta bikirka ah eeninkii bikirjabiyay wali lanool mataqaano ziseska xubnaha ta ninkale aragtay ee ama labanin isagadanbeeyeen ayaaka warqabta cabirkan markaa haweenay waxaa kacabanaysa waa hubaal inay ama labanin isagadanbeeyeen ooxalaal ah ama gogoldhaafsaysayReplyDeleteAdd commentLoad more...